Madaxda Itoobiya iyo Eritrea oo dib u furay xuduudda labada dal - Halbeeg News
in Soomaaliya, Xulka
ASMARA (MUQDISHO)- Raiisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha dalka Eritrea Asaias Afwerki ayaa booqasho wadajir ah ku tagay ilaalada xuduudaha labada dal si loo adkeeyo xiriirka ka dhexeeya labada dal oo ay soo dhex martay colaad labaatan sano ka badan qaadatay.
Abiy Axmed iyo Asaias Afwerki ayaa booqday Gobolka Bure oo ah gobolkii uu dagaalkii ugu weynaa ee dhacay intii dhexeysay 1998 illaa 2000 halkaas oo ay ku dhinteen 80,000 oo qof.
“Ra’iisul wasaare Abiy Axmed iyo Madaxweyne Asaias Afwerki ayaa booqday furinta hore ee xuduudda Itoobiya iyo Eritrea xilli loo dabaal degayo curashada sanadka cusub ee Itoobiya si xiriirka labada dal caadi loogu soo celiyo” ayuu ku yiri Fitsum Arega agaasimaha xafiiska raiisul wasaaraha Itoobiya hadal uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
Raiisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku sheegay khudbad hu xalay fiidkii ka jeediyay xafladda dabaal degga sanadka cusub in ciidamada xuduudda ee Itoobiya ay la dabaal degi doonaan ciidamada xuduudda Eritrea si loo sii xoojiyo xiriirka labada dal.
Itoobiya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyay in ay aasaan colaaddii labada dowladood ka dhexeysay labaatanka sano lana bilaabo bog cusub oo wada noolaasho iyo deris wanaag ah.
Madaxweyne Farmaajo oo ummadda muslimiinta ugu hambalyeeyay sannadka cusub ee Islaamka